एन्जियोग्राफी गर्ने क्रममा मतिष्कघात भएका बालरोग विशेषज्ञ डा. अग्रवालको निधन – Health Post Nepal
एन्जियोग्राफी गर्ने क्रममा मतिष्कघात भएका बालरोग विशेषज्ञ डा. अग्रवालको निधन
२०७६ जेठ ८ गते १०:१०
मुटुका धमनीहरुको अवरोधको जाँच एन्जियोग्राफी गर्ने क्रममा वेहोस भएका विराटनगर चर्चित बालरोग विशेषज्ञ डा. विमल अग्रवालको निधन भएको छ ।
कोसी अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत ४३ वर्षे डा. अग्रवालको नोवल मेडिकल कलेजमा एन्टियोग्राफी गर्ने क्रममा मतिष्कघात भएको थियो ।
मतिष्कघातपछि डा. अग्रवालको २४ गतेदेखि नोवल अस्पतालमा उपचार जारी थियो । उनको गएराती अस्पताल ११ बजे निधन भएको हो ।
एन्जियोग्राफीका समयमा हल्का बेहोस बनाएर प्रोसस गरिरहँदासम्म बोलिरहेका भनिएका अग्रवाल केहीबेरमा बेहोस भएको भनाई परिवार र आफन्तको छ । वेहोस भएपछि तत्काल ब्रेन स्ट्रोकको उपचार हुन नसक्दा ज्यान गएको परिवारको भनाई छ ।
परिवारका अनुसार अघिल्लो शनिबार छाती दुखेपछि सुरुमा डा. अग्रवालले घरैमा पेनकिलर र ग्याष्ट्रिकको औषधि लिएका थिए । आइतबार अञ्चल अस्पताल अगाडिको क्लिनिकमा इजिजी गराएका थिए । तर सुरुको इसिजीपछि उनी आफै सवारी चलाएर श्रीमतीसहित नोवल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए ।
सो क्रममा अस्पतालमा उनको इसिजी र टिएमटी गराएका थिए । दुबै रिपार्टपछि मुटुरोग विशेषज्ञ डा. राजेश नेपालको सोही दिन एन्जियोग्राफी गर्न सुझाब दिएका थिए । तर उनी सो दिन एन्जियोग्राफी नगरी घर फर्किएका थिए । मंगलबार पुनः उनी एन्जियोग्राफीका लागि अस्पताल पुगेका थिए ।
परीक्षणका क्रममा जटिलता थपिएपछि त्यसको समयमै उपचार नगरी लापरवाही गरेको आरोप आफन्तहरुको छ ।
डा. विमल अग्रवाल